‘षटकर्म शरीर शुद्धीको अचुक उपाय हो’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ योग ∕ ‘षटकर्म शरीर शुद्धीको अचुक उपाय हो’
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७८ फागुन ६ गते, ११:०४ मा प्रकाशित
विगत लामो समयदेखि योग अभियान संचालन गर्दै आएका विष्णुहरि आचार्य (योगीराज) लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय बुटवलका आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक हुन् । उनी कोभिड–१९ महामारीमा पनि योग अभियान संचालन गरेका कारण प्रदेश सरकारबाट सम्मानित भएका हुन् । योगीराजसँग षटकर्म चिकित्साका बारेमा हेल्थ आवाजका लागि डी.आर. बन्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
षटकर्म चिकित्सा के हो ? यसलाई सरल भाषामा कसरी बुझ्ने ?
बाहिरी शरीरको सरसफाइ स्नान (नुहाएर) गरेजस्तै आन्तरिक (भित्री) शरीरको विधिपूर्वक सरसफाइ गर्ने क्रियालाई षटकर्म अर्थात डिटोक्सिफिकेसन भनिन्छ । पूर्वीय चिकित्सा विधाहरु आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र योग चिकित्सामा यो विधि महत्वपूर्ण छ ।
यो कर्म गर्दा के कस्ता विधिहरुको अवलम्बन हुन्छ ?
षटकर्मको विधिपूर्वक अभ्यासले शरीरमा सक्रियताका साथ विश्राम प्रदान गर्ने हुनाले स्वतन्त्र क्रिया तथा स्नायु प्रणलीलाई सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । शास्त्रहरुमा षटकर्मका विभिन्न भेद–उपभेद भएपनि चिकित्साका हिसाबले विभिन्न ६ विधिहरुको अभ्यास गरिन्छ । ती अभ्यासहरु धौती, वस्ती, नेती, त्राटक, नौली, कपालभाती रहेका छन् । यी ६ प्रकारका कर्महरुको समग्र स्वरुप नै षटकर्म विधि हो । यो सबै विधिहरुको समिश्रण पनि हो । ६ वटा उपभेदहरुको विधि कर्म नै यसको विधि हुन आउँछ ।
यहाँले ६ प्रकारका उपभेद उल्लेख गर्नुभयो । यसको अभ्यासबाट के कस्ता फाइदा हुन्छ ?
पानी वा सफा कपडालाई मुखबाट खाएर पेटमा पु¥याइ वमन उल्टी गराउने विधिलाई धौती भनिन्छ । कपडा प्रयोगभन्दा पानीको प्रयोग सहज हुने हुनाले प्रयोगात्मक रुपमा पानीको प्रयोग गरिन्छ । पेटको सफाइ गर्ने यो विधिमा पानी उमालेर मनतातो गरी पानीमा थोरै नुन मिसाइन्छ । उक्त पानीलाई दुवै खुट्टाको गति मिलाई भुइमा टुसुक्क वसेर छिटो–छिटो घाटीसम्म आउने गरी पिइन्छ । त्यसपछि चोर औला र माझी औलालाई मुख भित्र राखी जिब्रोको पछाडि मसाज गरिन्छ । मसाज सुरु भएपछि खाएको पानी उल्टी हुन थाल्नुपर्छ । जब पानी पूरै निस्किन्छ । त्यसपछि सवासनमा २० देखि ३० मिनेट आराम गरी मुम मसुरोसहितको जाउलोमा एक दुई चम्चा घ्यू राखी पेटभरी खुवाइन्छ । यो अभ्यास गरेको दिनमा साविकभन्दा धेरै मात्रामा पानी तथा झोल जन्य खाना दिनु पर्दछ । माछा, मासु, फास्ट फुड, पेय पदार्थजस्ता खान वन्चित गरिएको छ ।
गुदामार्गबाट औषधियुक्त पानी वा वायुलाई भित्र प्रवेश गराएर पेट तथा ठूलो आन्द्रा सफा गर्ने क्रियालाई वस्ती भनिन्छ । विधिपूर्वक गर्दा यो विधि एनिमा भन्दा धेरै प्रभावकारी मानिन्छ । कडा किसिमको कब्जियत, अरुचि र वायु विकारमा यो अभ्यास लाभदायी छ । पेट तथा आन्द्राहरुको अप्रेशन गरेकाहरुले यो विधि गर्नु हुँदैन् ।
नाकमा औषधीयुक्त पानी वा विशेष किसिमको रवरको सानो डोरी तथा क्याथेटर प्रयोग गरी नाक सफा गर्ने विधिलाई नेती भनिन्छ । उमालेको मनतातो पानीमा थोरै नुन राखी, करुवा वा नेती वस्तुको सहायताले एक नाकको प्यालबाट राखी अर्को नाकको प्वाँलबाट निकालिन्छ । यो क्रिया गर्दा मुखलाई आ गरी खुल्ला राख्नुपर्दछ । कान रोग वा नात्रो फुट्ने समस्या भएकाले यो विधि गर्नु हुँदैन् । सुत्रनेती तथा घृत नेती पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । शिरोरोग, आँखाको कमजोरी, घाँटीका समस्या, पिनास, माइग्रेन, अनिद्राजस्ता समस्याहरुमा यो विधि प्रभावकारी छ ।
आँखा सफा गर्ने विधि त्राटक हो । घ्यू वा तेलको बत्ती तयार गरी हावा नलाग्ने ठाउँमा तीन चार फुट दूरीमा मिलाएर राखी, आँखालाई नझिम्काइ हेरिरहने विधिलाई त्राटक भनिन्छ । यो विधिमा आँखाबाट आँशु नबगुनजेल केहीबेर स्थिर भएर बसिन्छ । जब आँखाबाट आँशु वग्छ वा आँखामा केही पोलेजस्तो हुन्छ, त्यसपछि यो क्रिया वन्द गर्नु पर्दछ । त्राटकले आँखाको ज्योति बढाउँछ । मनको चञ्चलता हटाउँछ । निद्रा बढाउँछ । एकाग्रता ल्याउन यो अभ्यास महत्वपूर्ण छ । कडा खाले शिरोरोग र टाउकोको अप्रेसन गरेकाले यो विधि गर्नु हुँदैन् ।
नौली विधिमा दुवै खुट्टाबीच झण्डै एक फुटको फरक बनाएर हातलाई घुडामाथि हल्का दबाब साथ राखिन्छ । आँखाले भुँइमा हेर्दै पूरै श्वासलाई बाहिर छोडी, पेटलाई भित्र खिच्दै दायाँ वायाँ घुमाइन्छ । केही क्षणको अभ्यासपछि केही आराम गर्दै फेरी गरिन्छ । दुई तीन पटक गरिसकेपछि विश्राम गरिन्छ । यो अभ्यासले अरुचि, अपच, कब्जियत मोटोपन, पाठेघरका समस्या र सम्पूर्ण पेटभित्रका अंगहरुमा सक्रियता प्रदान गर्दछ । ढाडको समस्या, स्लीप डिक्स, हृदय रोग तथा अल्सरजस्ता समस्या भएकाले यो अभ्यास गर्नु हुँदैन् ।
सुखासन अथवा सहज आसनमा बसेर पेटलाई खुम्चाउँदै, दुवै नाकको प्वालबाट श्वासलाई बाहिर फालिने विधी कपालभाती हो । यो पछिल्लो समय निकै प्रयोगमा आएको विधि पनि हो । यो क्रिया ६० देखि १२० पटकसम्म गरेपछि केही क्षण विश्राम गरिन्छ र पूर्ण गरिन्छ । नियमित अभ्यासले मोटोपन, तनाव, मधुमेह, अरुची , रुघाखोकीजस्ता रोगहरु न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, छारे रोग, दम, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगी , ढाडका समस्या, पेटको शल्यक्रिया आदि गरेकाले यो अभ्यास गर्नु हुँदैन् ।
षटकर्म विधिका फाइदाहरु के हुन् ?
षटकर्म विधि धेरै रोगहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै मनका अनावश्यक भावहरु हटाएर चेतना विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विशेषतः षटकर्म शरीरमा कफ बढेको बेला मोटोपन, तथा त्रिदोषजन्य रोगहरुमा प्रभावकारी मानिन्छ । वदलिदो जीवनशैली, सहरिया बसाइँ र शारीरिक निष्क्रियताका कारण मानव शरीर मेसिनजस्तै भएको छ । जसले गर्दा नसर्ने रोगहरु उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, श्वासप्रश्वासजन्य समस्या र क्यान्सर दिन प्रतिदिन बढ्दैछन् । षटकर्मजन्य विधिहरुको क्रियात्मक अभ्यासलाई नागरिक स्वस्थ्यसँग जोडेर लैजान सकेमा नसर्ने रोग न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा मिल्दछ ।
यी विधीहरु कसको निगरानीमा गर्न सकिन्छ ?
षटकर्म चिकित्सा सुविधासम्पन्न आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालय र योगशालाहरुमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरुको निगरानीमा गर्नुपर्दछ । क्रियात्मक अभ्यास भएकाले धेरै रोगको न्यूनीकरणमा षटकर्म चिकित्साको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । विधिपूर्वक गर्न सकेका यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ । यी विधिहरुको लाभ लिनका लागि अनुरोध गर्दछु ।